वाम गठबन्धनः एमाले र माओवादीबीच सीट बाँडफाँड, कसको भागमा कति ? - Dainik Nepal
बिहीबार, ४ असोज २०७५
वाम गठबन्धनः एमाले र माओवादीबीच सीट बाँडफाँड, कसको भागमा कति ?
दैनिक नेपाल २०७४ असोज २६ गते १४:५१
काठमाडौं, २६ असोज । एमाले, माओवादी केन्द्र नयाँ शक्तिको वाम गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनका लागि क्षेत्र (सीट) बाँडफाँड प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रारम्भमा गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ६ मा ६०/४० को भागवण्डाका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बराबरी सीट संख्या बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेको छ ।
जस अनुसार प्रदेश २ मा एमालेले १६ र माओवादीले १६ सिट तथा प्रदेश ६ मा एमालेले ६ र माओवादी केन्द्रले ६ सीट पाउने छन् । प्रदेश २ र ६ सहित अन्य प्रदेशका बारेमा निर्णय लिन आज संयुक्त कार्यदलको बैठक जारी छ ।
यद्यपी प्रदेश २ र ६ का कुन कुन क्षेत्र एमालेले लिने र कुनकुन माओवादीले लिने भन्नेबारे अझै टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन् । स्रोतका अनुसार एमालेको पकड भएको र जित्नै आएको क्षेत्रमा एमालेलाई छाड्ने र माओवादी पकड क्षेत्रमा माओवादीलाई दिने तयारी छ ।
यस्तै, कार्यदलले सीट फाँडफाँडका साथै ‘आत्मनिर्भरतासहितको आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल एजेन्डा’सहितको घोषणापत्र लेखन कार्य अन्तिमतिर पुगेको जनाउँदै छिट्टै सार्वजिनक गर्ने तयारी भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन वृद्धि दोब्बर बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
शाखा अधिकृतलगायत तीन जना एक लाख घुससहित पक्राउ
आफ्नै छात्रालाई यौन प्रस्ताव राख्दा ‘पशु डाक्टर’को यस्तो हविगत !
विषाक्त मदिराले नेपाली मृत्यु प्रकरण : मलेसिया प्रहरीद्वारा १४ सय बोतल मदिरा बरामद
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
सबै नागरिकलाई बीमामा ल्याउन सके राहत र उद्धारमा सहज : गृहमन्त्री थापा
प्रचण्डले भेटे चिनियाँ उपराष्ट्रपतिलाई, यस्तो भयो कुराकानी
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दूई घाइते
नेपालको फिफा वरियतामा एक स्थान सुधार
चालकहरुको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलायो, एक घाइते
फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो शुरु
पूर्वएमालेको जिल्ला सदस्य थिए खुर्सिद आलम, गृहमन्त्रीलाई मुस्लिम नेताहरूको दवाव
प्रतिनिधिसभाका सबै विषयगत समिति सभापति निर्विरोध